WAX KASTA OO AAD U BAAHAN TAHAY INAAD KA OGAATO QAJAARKA QORYAHA - BEER CAGAARAN
Maanta, qajaarka yaryar ma keenaan wax la yaab leh, waxay muddo dheer caan ka ahaayeen dadka degan xagaaga sababtoo ah muuqaalkooda muuqaalka ah, cufnaanta iyo cufnaanta.
Qalcadaha Gherkin iyo dabeecadahooda
Gherkins qajaar yar, sida loogu yeedho Faransiiska, halkaasoo ay dadku bilaabeen, ha ka badna dhererka 9 cm. Xirmooyinka pickles kala duwan oo yar yar - kaliya 5 cm Labada noocba, marka laga reebo min-size, ha haysanin gudaha gudaha miro, cufan, taas oo lagu qiimeeyo marka la qaboojiyo.
Gherkins way ka duwan tahay qajaarka caadiga ah ee tiro badan oo ah maaddooyin wax ku ool ah iyo xaqiiqda ah in xitaa marka goyntu aanay ka badnayn dherer 10 cm. Gherkins waxay leedahay dusha siman, qaabka silylinder, marka la soo qaado, qajaarkan waa mid cufan iyo cawl, taas oo aan had iyo jeer ahayn kiisaska caadiga ah ee qajaarka.
Maanta, waxaan u mahadcelineynaa shaqo la'aanta cawska, noocyada dhirta ayaa la abuuray kuwaas oo leh sifooyin badan oo soo jiidasho leh: korriin dhakhso ah, difaac adag oo dhowr cuduro ah (xayrta maqaarka ah, xiirta caanaha ah, iwm.) Inta lagu jiro gaadiidka, dhalidda sare, muuqaal qurux badan iyo dhadhan fiican.
Ma taqaanaa? Marka si joogto ah loo isticmaalo, xoqan ayaa hoos u dhigaya heerarka kolestaroolka, caadiyan jirka dheef-shiid kiimikaadku, waxay nadiifiyaan mindhicirada iyo xoojinta nidaamka difaaca jirka.
Corneen abuurka qajaar ee dhulka furan waxaa lagu beeray bilaha Juun, sababtoo ah qajaarka yar ayaa ka baqaya heerkulka hooseeya. Waxaa la doorbidaa in ay ku koraan dhoobada iyada oo loo marayo geedo, pre-adkayn ka hor beerto in dhulka u furan. Qajaarin yar ayaa si fiican u koraan carrada dabiiciga ah, nafaqo leh oo leh astaamo asal ah oo ah 6-7 pH.
Muhiimada ah ee waraabinta qajaarka
Marka koraan dhoobada inta lagu guda jiro xilli sii kordhaya, waraabinta waxaa loo baahan yahay dhexdhexaad, inta lagu jiro ubax, waraabinta waa la dhimay.
Inta lagu jiro xilliga firalaha firfircoon, waraabinta waa lagama maarmaan maalin kasta, iyo kulaylka waxaa lagama maarmaan ah in la waraabiyo dhowr jeer maalintii.
Waa muhiim! Waxaa lagugula talin karaa inaad waraabiso biyo qashin ah heerkulka qolka qaybta labaad ee maalinta, ku buufinta subaxda ama fiidkii sidaa darteed qoyaanka caleemaha ku dhaca caleemaha, ka baxa qorraxda, kama tago gubasho.
Waxaa loo baahan yahay quudinta dhirta
Qajaarka yar-yar oo u baahan dhaymo dhexdhexaad ah, si liidata u dulqaadan bacriminta xad-dhaafka ah, gaar ahaan nitrogen. Laba toddobaad ka dib marka la beerto, quudinta ugu horreysa waxaa lagu fuliyaa qaab isku dheelan oo isku dhafan oo geedo ah ("Mortar A"). Wixii ugxan ugxan wanaagsan oo wanaagsan iyo qajaarka fruiting waxay u baahan yihiin potassium, samaynta naqil potassium mar.
Digniin! Haddii ay jirto cimilada aan degganeyn oo leh isbeddel heer-kulul oo soo noqnoqda, dhoobada ayaa yarayn karta kobcintooda iyo horumarkooda. Taageerada dhirta leh dharka ladagaallanka - "Garden Health Garden" ama "Ekoberin".
Miraha mini-gherkins waxaa lagu riixi karaa laba maalmood ka dib ugxan. Horeba ee foomkan, waxay noqon karaan qasacadeysan, inkastoo baaxadda - waa qajaar qallalan iyo qajaar cufan. Gherkins pickles qajaarka maalin kasta, marka ay gaaraan 3 - 9 cm dheer. Noocyo qajaar ka soo kooxda dhoobada ah waa in aan loo oggolaan in ay overripe, iyo ka dib goosashada, meel meel fiican qabow loogu talagalay ka hor inta geedi socodka goosashada ee jiilaalka.
Xiiso leh Qajaarku wuxuu leeyahay noocyo badan: marka lagu daro dhoobada, waxaa weli jira sida Anguria - qajaar la jaray, oo ka imanaya Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika; Kivano - qajaar leh dhadhanka muuska, koray ee Israel, Central America, New Zealand nafaqada cuntada; dosakay - curry qajaar, kala duwan Hindi leh dhadhan macaan; Melotriya waa qadar Afrikaan ah, oo leh ma aha oo kaliya miraha la cuni karo, laakiin sidoo kale khudaarta cagaaran.
Noocyada ugu caansan ee dhirta
Maanta dhaqanka waxaa jira magacyo badan oo loogu talagalay dhirta qumbaha. Noocyo kala duwan oo sifooyin kala duwan ah iyo qaababka beerashada: oo lagu koriyo, lagu koriyo, dhulka oo furan; Noocyo ay samaysay bees iyo faafin si gaar ah by habka dhirta. Waa suurtagal in la qeexo dhammaan noocyada, gaar ahaan tan cusub oo soo muuqda maalin kasta. Ka fikir qaar ka mid ah noocyada ugu caansan maanta.
Kala duwan ee Bisaylkiisa hore, self-pollinating, mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee fardaha, qajaarka ee beerista ee lagu koriyo iyo berrin bannaan.
Dhulbadhaha qaab dhismeedka silsilad, oo leh tubercles waaweyn oo dusha sare ah, koraan illaa 9 cm.Qaar ka mid ah waxay u adkaysataa cuduro badan, oo ay ka mid yihiin kalluunka rootiga.
Kala duwanaanta Moravian waa jecel yihiin shinni, sidaas darteed waxaa fiican in ay ku koraan berrinka bannaan. Kala duwanaanta miraha way ka koraysaa 6 ilaa 9 cm, dusha sare ee qajaarka waa dhexdhexaad ah, korriin waa suurtogal in lagu koriyo iyo sariiraha. "Morchian gherkin" oo adkaysi u ah cudurrada.
"Paris waa la dabooli karaa"
"Farshaxan Paris" - waxay samaysay beeraleyda kala duwan, waxay leeyihiin wax soo saar sare. Duurka u tallaabaa ma koraan dheer oo afkoda, waa suurad wacan si ay u koraan dhulka u furan.
Habboon ee caanaha. Miraha waa muddo dheer - ilaa 12 cm, qaab ah silylinder, miisaanka midhaha waa qiyaastii 85 g. Jirka waa qallayl, cufan, ma jirto qadhaadh.
Kala duwan Tani waa daaqi, waa mid ku habboon koritaanka on loggia ama on windowsill ah. Dhererka dhirta ilaa 11 cm, midabka - cagaar cagaaran. Kala duwanaantu waa mid aad u badan fruiting iyo leedahay sifooyinka dhadhan fiican.
Shaki la'aan oo lagu daray qajaarka-yar yar waa dhalidda sare, ka dib markii la ururiyo miraha ugu horreeya, kuwa soo socda ayaa ku xiran. Qeybaha ugu caansan ee qajaarka leh ayaa laga sameeyaa dhirta. Xilliga jiilaalka, qajaarka cagaaran iyo qandhada cagaaran ma aha oo kaliya inay ku farxaan dhadhanka, laakiin sidoo kale qurxin miisaska fasaxa.